के के गरे भारतीय विदेश सचिवले नेपाल आएर? - DURBAR TIMES
HomePoliticsके के गरे भारतीय विदेश सचिवले नेपाल आएर?
नेपाल र भारतका विच झन्डै एक वर्ष देखी सिमा विवादका बाबजुद कुनै पनि कुटनितिक पहल नभैरहेको अवस्था विच भएको भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाको दुई दिने औपचारिक भ्रमण शुक्रबार सम्पन्न गरी नयाँ दिल्ली फर्केका छन् ।
काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रृंगलाको नेपाल भ्रमण सफल भएको जनाएको छ ।
भ्रमणको पहिलो दिन भारतीय विदेश सचिव श्रृंगलाले नेपालका समकक्षी भरतराज पौड्याललाई भेट गरे । सोही क्रममा विदेश सचिव श्रृंगलाले नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरे ।
दुई परराष्ट्र सचिवको बैठकमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न पक्षका बारेमा छलफल एवम् समीक्षा गरेका थिए । उनीहरुले महामारीले निम्त्याएको विषम परिस्थितिको बाबजुद सहकार्यको विविध क्षेत्रमा भएका उल्लेखनीय प्रगतिमा सन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
यस अवधिमा सीमामा व्यापार र वाणिज्यको सहज र निर्बाध गतिविधि तथा विकास परियोजनाहरूको सक्रिय कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न भारत सरकारले खेलेको भूमिकाको नेपाली पक्षले सराहना गरेको दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दुवै परराष्ट्र सचिवले सीमा सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नुका साथै बाँकी खण्डमा सीमा सम्बन्धी कार्यहरु सम्पन्न गर्ने बारे आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले उच्चस्तरीय द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ गतिलाई कायम राख्न र दुवै देशहरूबीच परम्परागत रूपमा घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण र बहुपक्षीय साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउन सहमति जनाए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट :
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको शिष्टाचार भेटवार्तामा भारतीय विदेश सचिव श्रृंगलाले भारतका राष्ट्रपतिको सन्देश सुनाएका थिए । उनीहरुले दुई देशबीचको घनिष्ट सम्बन्ध र यसलाई अझ मजबुत बनाउने तरिकाहरु बारे छलफल गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट :
भारतीय विदेश सचिव श्रृंगलाले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि बिहीबार साँझ भेट गरे । ओलीसँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा श्रृंगलाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश सुनाएका थिए । यसवाहेक श्रृंगलाले समकक्षी भरतराज पौड्यालसँग भएको फलदायी भेटवार्ताबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग भेट:
विदेश सचिव श्रृंगलाले द्विपक्षीय सम्पर्कलाई गति प्रदान गर्न, जनता-जनताबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन, सारभूत एवम् रणनैतिक द्विपक्षीय पहल र आपसी हितका विषयहरुको ठोस प्रगतिका लागि दुवै पक्षबीच सहमति आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँगको भेटका क्रममा दुवै पक्षबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरण र द्विपक्षीय आदानप्रदान र सहकार्यको दिशालाई अघि बढाउनेबारे दुबैले विचार आदानप्रदान गरेका थिए ।
श्रृंगलाले कोभिड–१९ को चुनौतीलाई सामना गर्न भारतले गरेको उल्लेख्य प्रगतिबारे पनि परराष्ट्रमन्त्रीलाई जानकारी गराए । यस्तै श्रृंगलाले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरको संयुक्त आयोगको अर्को बैठकमा सहभागी हुन पठाएको निमन्त्रणा पनि सुनाएका थिए । बैठकपछिको छुट्टै समारोहमा भारतीय विदेश सचिव श्रृंगलाले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि २००० थान रेम्डेसिभिर इन्जेक्सन समेत हस्तान्तरण गरे ।
भारत सरकारले गत अप्रिल महिनादेखि नै कोभिड-१९ विरुद्व लड्न आवश्यक औषधी, उपकरण तथा क्षमता विकासमा नेपाललाई सहयोग पुर्‍याएको छ । अहिलेको सहयोग पनि त्यसकै निरन्तरता भएको दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कोभिड-१९ सम्बन्धी हरेक सहयोग पुर्‍याउने कुरामा नेपाललाई भारतको निरन्तर साथ रहने कुराको आश्वासन पनि श्रृंगलाले दिए ।
गोरखामा भारतीय सहयोगमा निर्माण भएका स्कुलको उद्घाटन:
शुक्रबार श्रृंगलाले भ्रमणको अन्तिम दिन गोरखामा भारतीय सहयोगमा निर्माण भएका स्कुलको उद्घाटन समेत श्रृंगलाले गरेका थिए । साथै मनाङमा भारतीय सयोगमै निर्माण भएको बौद्ध गुम्बाको पनि उनले हस्तान्तरण गरे ।
यससँगै श्रृंगलाको यस भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि भारतीय सेना प्रमुख र रअ प्रमुखको नेपाल भ्रमण लगत्तै विदेश सचिवको भ्रमणलाई दुई देशको कुटनीतिक सम्बन्धमा अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
Previous articleयुनाइटेड इदी मार्दीको आइपीओ आइतबार बाँडफाँट हुँदै
Next articleनेकपा सचिवालय बैठक आज बस्ने